हातको प्रयोगविना त केही पनि सम्भव छैन आफ्ना यी अंगमा हात लगाउँदा अवश्य ध्यान पुर्याउनुहोस् । :: Nepal Post Dainik हातको प्रयोगविना त केही पनि सम्भव छैन आफ्ना यी अंगमा हात लगाउँदा अवश्य ध्यान पुर्याउनुहोस् । | Nepal Post Dainik
हातको प्रयोगविना त केही पनि सम्भव छैन आफ्ना यी अंगमा हात लगाउँदा अवश्य ध्यान पुर्याउनुहोस् ।
सचिता सिहं। हातको प्रयोगविना त केही पनि सम्भव छैन भन्ने हामीलाई लाग्ने गर्छ । तर, कतिपय अंगमा यही हात बराम्बार लगाउनु पनि घातक हुनसक्छ । आउनुहोस्, हामी यहाँ त्यस्ता केही अंगको बारेमा जानकारी दिँदैछौं जहाँ हात लगाइराख्नु नोक्सानदायक हुनसक्छ ।
हात मानिसको यति सक्रिय र सहयोगी अंग हो कि अन्य कुनै पनि अंगलाई आवश्यक पर्दा सहयोगका लागि तुरुन्त हाजिर भइहाल्छ । चिलाएका बेलामा कन्याउन होस् या अन्य कुनै अंगलाई सफाई गर्न सबैमा हातकै प्रयोग हुन्छ ।
औंलाले कान कोट्याउने बानी राम्रो होइन । यसले कानमा इन्फेक्सन हुने देखि जाली फाट्नेसम्मको समस्या आउन सक्छ । स्कूल आप मेडिसिन अफ यूएससीका नाक/कान/घाँटी विशेषज्ञ प्रोफेसर डा. जोन के. निकार्पो भन्छन्, ‘कानमा औंला या अन्य केही चिज हाल्दा त्यहाँभित्रको झिल्ली फाट्नसक्छ ।’
छाला रोग विशेषज्ञ अदनान नासिर एमडीका अनुसार आफ्नो हातको प्रयोग अनुहारमा क्रिम लगाउन र सफा गर्न त सकिन्छ । तर बारम्बार अनुहारमा हातले चलाइराख्नु राम्रो हुँदैन । हात निकै नै धेरै प्रयोग भइराख्ने अंग हो ।
बाहिरी बस्तुहरुसँग सम्पर्कका दौरान किटाणुहरु हातमा रहेका हुन्छन् । यसरी किटाणुहरुले भरिएको हात बारम्बार अनुहारमा लगाइरहँदा हाम्रो संवेदनशील अंगहरुसँग किटाउँको सहजै पहुँच पुग्छ । त्यसैले यस्तो बानी राम्रो मानिँदैन ।
आँखामा केही पर्दा हामी हातले माड्न थालिहाल्छौँ । तर यो निकै नराम्रो बानी हो । यसो गर्दा आँखामा सजिले किटाणु प्रवेश गर्छ । इन्फेक्सन हुनसक्छ । आँखालाई हातले बारम्बार छुने र माड्ने नगर्नुहोस् ।
इन्फेक्सन कन्ट्रोल एवम् हस्पिटल इपिडिमियोलोजी जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार शरीरमा स्टेपाइलोककस ओरस नामक ब्याक्टेरिया प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ । यो खतरनाक ब्याक्टेरियाले शरीरमा कैयन प्रकारका इन्फेक्सन हुन्छन् ।
युकेमा हालै गरिएको एक रिसर्चका अनुसार मानिसहरुले दिनमा औसत २३.६ पटक आफ्नो औंला मुख वा त्यसको आसपासमा पुर्‍याउँछन् । तर, किटाणु शरीरमा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा मुख्य बाटो नै यही हो । हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने एक तिहाइ रोगका जिवाणुहरु यही बाटो हुँदै प्रवेश गर्छन् ।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य रहांै व्यस्त रहौं ।